Izay azo raisina amin’ny kabarin’ny Fat. | mandimby maharo
Izay azo raisina amin’ny kabarin’ny Fat.
Posted on 9 January 2013 by Mandimby Maharo
Nanala ny fony i Andry Rajoelina Noteteziny nandritra ny kabary fifampiarahabana tratray ny taona vaovao teny Iavoloha ny 09 janoary ireo tsaho sy takoritsika maro momba ny fitondrany. Ankoatry ny fitanisanaireo zavabita maro sosona toy ny hopitaly sy ny kianja Makis ary ny colesium, sy ireo tetikasa mbola ho avy toy ny fanamboarana lalana vaovao mankeny Ivato sy ny hampidirana lamasinina Tgv eto dia nitodika manokana tamin’ny iraisam-pirenena ny kabary izay nataony.
Tsy hanaiky ny teritery atao azy noho ny tombotsoan’ireo firenena vahiny ny Fat raha nitsotra ny momba ny fampiasam-bola izay ataon’ny orinasa mpitrandraka Nikel sy Cobalte. “Tombombarotra mihoampampana no azon’ireo vahiny ireo ka izay ny antony anerena ahy toy izao” hoy izy; Novaliany koa ny fanankianan marobe mahazo ny fanenjehana dajalo any atsimo. “misy ny faly ..; ka sao dia tokony ho alefa manenjika dahalo any ireo mpanakina ireo?”, fanontanina izay miantefa any amin’ireo fikambanana miaro ny zon’olombelona io. Niezaka nametraka ireo lalana tiany hitondrany ny firenena ny Fat ka nanamafy fa tsy hanaiky izay rehetra tian’ny vahiny atao. Tsy hanara-drenirano fotsiny izay fomba vahiny koa izy ka”raha mbola mpitondra eto dia tsy hanaiky … ny fanambadian’ny lahy sy ny lahy izy … satria ve izay no ayao hoe zon’olombelona?”. Nireharehan’ny Andry Rajoelina koa fa mahavita zavatra maro ny tetezamita ka tsy mila mindrana vola avy any ivelany. Efa maro koa ireo NAMANA tsara sitrapo vonona hanampy ka tsy hisy olana ny hahatratrarana ny fanamby. “Rehefa miteny aho fa ho atao izao, dia mahazo matoky ianareo fa ho vita izay!” hoy izy namarana ny kabariny.
Tsy kabary politika no nanambarana azy tany amboalohany. Saingy mavesatra loatra ao antsain’i Fat ny politika ka voatery nanao resaka politika ihany izy. Na izany aza, teny ihany ireny ka teny, fa hatreto aloha dia tsy mbola misy fiantraikany tsara amin’ny fiainan’ny be sy ny maro izany. Ireo NAMANA nitehaka sy nampitsanganina ihany no toa mahazo tombotsia.. Namana izay tsy vahiny fa malagasy toa ahy koa.
Tags: 2013, Andry Rajoelina, Iavoloha, politiqueCategories: Actralité, politique